Ukuthuthukiswa kwe-Remdesivir Solubility eyenziwe ngcono yi-Sonication - Hielscher Ultrasound Technology
I-Remdesivir (GS-5734) umuthi olwa negciwane, ophansi kocwaningo lokwelapha isifo se-Ebola virus and COVID-19, obangelwa yi-Sars-CoV-2 coronavirus. I-Remdesivir yikhambi lezemithi, elilawulwa ngaphakathi. Ngenkathi ukuqeda okufushane kwe-ultrasonic kukodwa kukhulisa amandla we-solubility we-remdesivir futhi kuthuthukise ukwakheka kwayo, ukuguqulwa kwe-ultrasonation ye-remdesivir ngaphakathi kwe-cyclodextrin complexes kuyindlela ethembisayo yokunqoba izingqinamba zokuwohloka kwe-remdesivir, okwenza umuthi utholakale kakhulu.
Ukudideka kwe-Ultrasonic kwe-Remdesivir ku-Cyclodextrin Drug Carriers
I-Sulfobutyl-ether beta-cyclodextrin (SBE-β-CD) isetshenziswa njenge-Excipient noma i-ejenti eyakha ukwandisa ukuguquguquka kwama-soluble agents. Ucwaningo lukhombisa ukuthi ukufakwa kwezixazululo kabusha kwezixekweni ze-SBE-BE-CD kuzothuthukisa ukuguquguquka kwamandla okuvuselelwa kokwenza ngcono ukwanda kwezinga lokungena kanye ne-bioavailability.
Ukwakheka kocwaningo lwe- "in vitro":
H2O: 250 mg / mL – idinga i-ultrasonication yokugcoba emanzini
I-Dimethyl sulfoxide (DMSO): 5.625 mg / mL – idinga i-ultrasonication + Ukushisa i-solubilisation
Ukwakheka kocwaningo lwe "vivo":
Faka i-solvent ngayinye ngakunye: 10% DMSO, 40% PEG300, 5% T 80, 45% saline + sonication
I-solubility: ≥ 2.17 mg / mL (3.60 mM); Sula isixazululo
Faka i-solvent ngayinye ngakunye: 10% DMSO, 90% (20% Sulfobutyl-ether beta-cyclodextrin (SBE-β-CD) ku-saline) + sonication
Faka i-solvent ngayinye ngamunye: I-10% DMSO, i-90% yamafutha ommbila + i-sonication
I-Ultrasonication inyusa ukusabalalisa nokuqeda ukulungisa kabusha okubangela ukwakheka okusebenzayo kakhulu kanye ne-bioavailability ephezulu.
Izinzuzo zeCyclodextrin Complexes
Ama-cyclodextrins (ama-CD) asetshenziswa kabanzi ukwenza ngcono ukusebenza kwezidakamizwa kanye ne-potency, okusho ukuthi umuthi ungabanjiswa ngethamo eliphansi kakhulu ngenkathi ufinyelela umsebenzi omkhulu wokwelapha.
Izidakamizwa ezakhelwe ku-cyclodextrin complexes zinikeza ukwanda kwezidakamizwa okwandayo, okwehlisa i-cytotoxicity ngokwenza umuthi uphumelele kumthamo ophansi. Isibonelo, ukwanda kwe-β-cyclodextrin ye-ganciclovir kuthuthukise umsebenzi wesithako somuthi wesifo kuma-cytomegalovirus emitholampilo yabantu. Kamuva, ukwanda kwezidakamizwa okuholele ekutheni kwehlise ubuthi bezidakamizwa. Sekukonke, ama-cyclodextrins akhombisa isilinganiso esihle kakhulu sokumunca futhi anciphise iziphazamiso ezibangelwa izidakamizwa. Ukufakwa kwe-cyclodextrin kuyalungisa ukwehlisa ukuqina kwendawo yesidakamizwa samahhala, ukuze ukuqoqwa kungaphansi komkhawulo wokucasulwa. Ukufakwa kwe-cyclodextrin kuthuthukisa ukuzinza kwezidakamizwa futhi kuvimbela ukungalingani. Ekugcineni, iCD icubungula iphunga lezidakamizwa zemaski kanye nokunambitheka kwangaphandle.
I-UIP2000hdT I-ultrasonicator yamakhemikhali ekhemisi engagculisi yensimbi ye-pharma batch
Ama-Ultrasonicators aphezulu Wokusebenza Okuphezulu Kwezidakamizwa
I-Hielscher Ultrasonics yesikhathi eside isipiliyoni kumklamo, ukukhiqiza, kanye nokusatshalaliswa kwama-homogenisers aphezulu we-ultrasonics omkhakha wezemithi, wokudla, nowokuhlobisa izimonyo. I-Hielscher iyaziqhenya ngokuba hhayi nje kuphela umphakeli we-Hardware, kepha inikezela ngokubonisana okuningiliziwe nokuqeqeshwa kwezinhlelo zokusebenza ze-ultrasonic kanye nokufakwa nokusebenza kwezinhlelo ze-ultrasonic.
Ukulungiswa kwezinga eliphezulu le-cyclodextrin complexes nezinye i-nanostructured abathwali bezidakamizwa auch njenge-niosomes, liposomes, lipid nanoparticles, noma ama-nanoparticles we-polymeric izinqubo, lapho izinhlelo ze-Hielscher ultrasonic zisebenza kahle kakhulu ngenxa yokwethembeka kwazo okukhulu, ukuphuma kwamandla okungaguquki, kanye nokuqondana okuqondile. Ama-ultrasonicators we-Hielscher avumela ukulawula okuqondile kuwo wonke amapharamitha wenqubo, njenge-amplitude, izinga lokushisa, ingcindezi namandla we-sonication. Isoftware ehlakaniphile ithela ngokuzenzakalelayo yonke imingcele ye-sonication (isikhathi, usuku, amplitude, amandla net, amandla aphelele, izinga lokushisa, ingcindezi) ekhadini le-SD-khadi elakhelwe ngaphakathi.
I-Remdesivir iyisidakamizwa, esakhiwe yiGileyadi Science yokwelapha izifo ezibangelwa amagciwane ezifana nesifo se-Ebola virus kanye nesifo segciwane leMarburg. Ngokuya ngesifundazwe ngo-Ephreli 2020, kusesigabeni sezifundo zomkhondo wokuthola imitholampilo ukuze kuvunyelwe ukwelashwa kwesifo se-Ebola virus. Kulesi bhubhane sika-2020 COVID-19, imiphumela ye-antiviral ye-antiviral ku-SARS-CoV-2 coronavirus iyaphenywa. Njenge-analogue ye-nucleotide, ikakhulukazi i-analogue ye-adenosine, i-remdesivir ifaka emgodini we-RNA wegciwane, iphazamisa inqubo yokuphindaphinda yegciwane.